Shiinaha 2108 AWWA C504 C516 Double Eccentric Balanbaalis Madax warshad iyo soosaarayaasha | Convista
Xarumaheena si fiican u qalabaysan iyo maaraynta tayada sare ee gaarka ah dhammaan heerarka jiilka waxay noo suurta gelineysaa inaan damaanad qaadno wadarta qanacsanaanta iibsadaha ee 2108 AWWA C504 C516 Double Eccentric Butterfly Valve, Dhammaan alaabooyinka waxay la yimaadaan tayo wanaagsan oo adeegyo iib ah kadib. Ku jihaysan suuqa iyo u jihaynta macaamiisha ayaa ah wixii aan daba joognay. Si daacadnimo leh u rajee iskaashiga Win-Win!
Xarumaheena si fiican u qalabaysan iyo maaraynta tayada sare leh ee ugu sareysa dhamaan heerarka jiilka waxay noo suurta gelineysaa inaan damaanad qaadno wadarta qanacsanaanta iibsadaha ee Cast Steel Double Double Eccentric Butterfly Valve, Double Eccentric Butterfly Valve, Iyagu waa moodelin waara oo si fiican adduunka oo dhan ugu dhiirrigeliya. Marnaba xaalad kastoo lumaya howlaha muhiimka ah waqti kooban, waa mid adiga shaqsi ahaan kuugu habboon tayada cajiibka ah. Waxaa hagtay mabda 'Prudence, Kartiency, Union and Innovation. ganacsigu wuxuu sameeyaa dadaal aad u wanaagsan oo lagu balaadhinayo ganacsigiisa caalamiga ah, kor loogu qaadayo ganacsigiisa. rofit iyo hagaajinta qiyaasta dhoofinta. Waxaan kalsooni ku qabnaa inaan yeelan doonno rajo firfircoon oo naloogu qaybiyo adduunka oo dhan sannadaha soo socda.
Buuxin ama ka badiso shuruudaha AWWA C504 / C516.
Nooca laba jibbaaran.
Giraanta kursiga caaggu ku duuban yahay saxanka.
Kursiga birta ah ee aan cufan lahayn ayaa jirka ku xirmay.
Flange sii kordhaya sida waafaqsan MSS SP-102 ama ISO 5211.
Flange iyo qodista waxay u hoggaansameysaa ASME B16.1 Class 125 / Class 250.
Ku shaqaysa hawlwadeenka marsho.
150psi ayaa lagu qiimeeyay -10 ° C ilaa 120 ° C (14 ° F ilaa 250 ° F) oo loogu talagalay lakabka EPDM.
150psi oo lagu qiimeeyay-10 ° C ilaa 82 ° C (14 ° F ilaa 180 ° F) loogu talagalay safka BUNA-N.
NSF waxay ansaxisay daaha isku dhafan ama rinjiga dareeraha ah.
BUNA-N kursiga jirka oo isku xidhan.
250psi ayaa la heli karaa
Jirka birta ductile
Kursi Bir daxal laheyn
Usheeda dhexe Bir daxal laheyn
Saxanka birta ductile
Hore: MJ Taxanaha Buufin Xakamaynta Biyaha
Xiga: CH Habka Nidaamka Kiimikada Caadiga ah
Tuur Steel Double Double Balanbaalis Madax
DSA Hal marxaladood bamka nuugista labajibaaran
5101 Valve Check Valve